Iiposta ezili-14 ze-NASA ezikwenza ukuba uphuphe ngokuHamba kweSithuba | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Fumana zonke iipowusta ezili-14 ezivela kuthotho lwe-NASA "Imibono yexesha elizayo"
I-NASA ngaphantsi kweentsuku ezilishumi ezidlulileyo Usinike iiposta ezintathu ezikhuthaza ukuhamba emajukujukwini okanye ubuncinane ukuphupha ngekamva eluntwini. Ezinye iipowusta zikumgca omnye njenge ezo zeSithuba X kwaye oko kulungiselela ukuba ukhenketho lwendawo ngokuqinisekileyo inzala yethu iya kuba nakho ukufikelela kwixesha elizayo.
Kwaye kunjalo namhlanje xa I-NASA ifuna ukukuhenda kuloluphi uhambo oluza kubakho ngeeposta ezili-14 zizonke eziya kukuvumela ukuba uhambe nengqondo yakho eYurophu, enye yeenyanga zikaJupiter, okanye ukumangaliswa ngamawele elanga kaKepler 16b. Emva koko, unokuzikhuphelela nganye kwezo zilishumi elinesine zeepowusta onokuqhubeka uphupha ngazo ngenye imini ufikelela ezinkwenkwezini.
Ke ukuba ukhe wafuna Zulawula ulwandle olunomkhenkce lweTitan okanye ukubhabha phantsi kobunzima beplanethi ye-HD 40307 g ye-Pictor yeenkwenkwezi, ngokuqinisekileyo kunye nezinye iiposta esabelana ngazo ukusuka kwi-NASA, uya kuba nakho ukwanelisa loo mnqweno.
Ezi poster ziqhubeka ukusuka kuthotho lwee-Explanet Travel Bureau eyayiyilwa yi studio yoyilo yeJPL kunyaka ophelileyo. Uphononongo lunceda oososayensi kunye neenjineli ukucwangcisa uthumo lwexesha elizayo, oko kuthetha ukuba bahlala ngaphezulu kwezona zimvo zangoku kunye nezona zibalaseleyo ezivela kwiilebhu.
Xa bebuzwa yi-NASA ukuba benze iipowusta ezintsha zolu ngcelele, bakwazi ukudibanisa ezinye zezimvo zearhente uceba ikamva, nanjengoko ezo zixeko zidadayo eVenus.
Nangona kunjalo kuninzi esele Ukuze zonke ezo ngcinga kunye nokucinga kwangaphambili kube nathi, akukaze kubuhlungu ukuphupha kwaye ucinge ngokujonga ngononophelo kuzo zonke iiposta zomgangatho omkhulu kulo mzekeliso.
Khuphela zonke iiposta zeNASA ezili-14
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Fumana zonke iipowusta ezili-14 ezivela kuthotho lwe-NASA "Imibono yexesha elizayo"
Iiphakheji ezingama-26 zonxibelelwano lwezicelo zeselfowuni simahla